Looshinka & Warshadda kareemka gacanta - Shiinaha Looshin Jirka & Soosaarayaasha kareemada gacmaha, shirkado
Lavender Butter Body Jidhkiisa iyo Uumeeyaha Looshinka Haweenka
MUUQAAL: Lavender Lavender-ku si taxaddar leh ayaa loogu qasbay inuu dejiyo oo u dejiyo maqaarka iyo dareemayaasha. SET dhammaystiran HBS waxay ka kooban tahay -180ml Lotion -ka - Sanduuqa warqadda daabacan ee midabada Faahfaahin: • Qoto Dheer ayaa qoyaya Maqaarka Qalalan: Nooceena Ceyrta ah ee Shea Butter-ka wuxuu qooyaa maqaarka wuxuuna caawiyaa jilicsanaanta iyo jilicsanaanta meelaha qalalan. • 100% Shea Butter qaydhiin oo aan la sifayn: Noolaha Shea Butter waa 100% daahir ah oo aan la sifeynin si loo ilaaliyo dhamaan faa'iidooyinka quruxdeeda - maahan subagga jirka la karbaashay ama looshinta shea. • Subagga Wejiga iyo Jirka ...
Qoyaanka Daryeelka Jirka Qoyaanka Shea Butter Body cusbo
BADBAADO: Saliida Rose Rose waxaa loo tixgeliyaa inay tahay yareynta walbahaarka iyo hurdo hurinta iyadoo sidoo kale loo yaqaan 'aphrodisiac', oo gacan ka geysaneysa dhimbiilahaas jacaylka ah. SET dhammaystiran HBS waxay ka kooban tahay -180ml Looshinka jirka - Sanduuqa warqadda daabacan ee Midabada Faahfaahin: • Luuq aad u fuuq-bax xoog leh: ku kobci maqaarkaaga urka jilicsan & qoyaan aan joogsi lahayn. Biyaha sare ee Rose waxay maqaarka si xoog leh u qoyaan maalinta oo dhan, halka Aloe ay caawiso daaweynta caabuqa. • Isku day aruurintayada buuxda ee si mas'uuliyad leh loo soo saaray oo si anshax leh loo soo saaray ...
Subag Shea daahir ah wajiga iyo jirka qoyaanka jirka dabiiciga ah ee maqaarka qalalan
BARNAAMIJKA: Wild Orchid leh Vanilla VANILLA WAA OGAYSIIS-JOOJINTA MUUQAALKAN SI AAD U HESHO BADAN. Kaymaha duudduuban iyo heshiisyada miraha qaniga ku ah waxay gacan ka geystaan ​​soo saarista urka dabiiciga ah ee maqaarka, dhalada farshaxanka-qurxinta lehna waxay ku darsataa soo jiidashada guud ee udgoonka. SET dhammaystiran HBS waxay ka kooban tahay -180ml Lotion -ka - Sanduuqa warqadda daabacan ee midabada Faahfaahin: • Qoto Dheer ayaa qoyaya Maqaarka Qalalan: Nooceena Ceyrta ah ee Shea Butter-ka wuxuu qooyaa maqaarka wuxuuna caawiyaa jilicsanaanta iyo jilicsanaanta meelaha qalalan. • 100% ceeriin iyo mid aan siffeyn ...
Hadiyad udgoon gacan udgoon udhig gacmo gacmeed lagu kobciyey qoyaanka dhirta dhirta ee gacmaha dillaacsan
[Xajmiga Safarka ee Wanaagsan] 3Pcs cabbirka safarka ayaa ku habboon boorsadaada gacanta, oo sahlan in la qaado oo meel lagu kaydiyo. Cabbirka weelka ayaa ugu fiican in meel kasta la qaado. Tuubooyinka waa la qaadi karaa, taasoo ka dhigaysa mid fudud inay ku ridaan boorsadaada ama boorsadaada. Sidoo kale, kuwani waa cabbirka ugu fiican ee hadiyad loo siinayo asxaabtaada iyo qoyskaaga. [3 Udgoon Qurux Badan] Badweynta, Liinta, Strawberry Udugga Gacanta Kareemka Gacanta. Ka dooro oo ka dooro caraftaada aad ugu jeceshahay iyada oo ku saleysan niyaddaada xilligan laga joogo 3 urka dabiiciga ah. [Dhamaan Noocyada Maqaarka] Pu ...
Hadiyad Kareemka Gacanta ah oo Qoyaan loogu Sameeyo Gacmaha iyo Cagta Qalalan
[Xajmiga Safarka ee Wanaagsan] 3Pcs cabbirka safarka ayaa ku habboon boorsadaada gacanta, oo sahlan in la qaado oo meel lagu kaydiyo. Cabbirka weelka ayaa ugu fiican in meel kasta la qaado. Tuubooyinka waa la qaadi karaa, taasoo ka dhigaysa mid fudud inay ku ridaan boorsadaada ama boorsadaada. Sidoo kale, kuwani waa cabbirka ugu fiican ee hadiyad loo siinayo asxaabtaada iyo qoyskaaga. [3 Udgoon Qurux Badan] Doogga Duurjoogta, Peony, Daisy Udgoon Caano Gacmo Gacmeed Ka dooro oo ka dooro caraftaada aad ugu jeceshahay iyada oo ku saleysan niyaddaada xilligan laga joogo 3 urka dabiiciga ah. [Dhamaan Noocyada Maqaarka] P ...